Ahoana ny fomba fiasa miaraka amin'ny artboards ao amin'ny Illustrator amin'ny fomba milamina | Famoronana an-tserasera
Paul gondar | | Graphic Design, sary
Mianara hiara-miasa amina artboards marobe ao amin'ny Illustrator Mba hanatsarana ny hafainganana sy ny fahaizanao mandanjalanja amin'ny fomba fiasao rehefa manatanteraka tetik'asa sary iray ianao izay mila fampiasana karazany maro amin'ny endrika, ohatra rehefa manamboatra lohateny ho an'ny tambajotra sosialy isan-karazany izahay dia mila ny endriny tsirairay hifanaraka amin'ny fandrefesana ny tambajotra sosialy tsirairay. Amin'ny alàlan'ny fampiasana ny latabatra fiasana dia afaka manana habaka marobe isika Miasa amin'ny fepetra samihafa aho Amin'izany no ahafahantsika mampifanaraka ny volavolan'ny lohanay amin'ny tambajotra sosialy rehetra.
Illustrator mamela antsika hiasa tetikasa amin'ny fomba matihanina sy milamina noho ny fanamorana izay Latabatra fiasana rehefa mandamina ny singa rehetra amin'ny endrikay afaka fanondranana amin'ny fomba voafehy tsirairay amin'ireo latabatra fiasana. Mianara bebe kokoa momba ity programa famolavolana sary mahafinaritra ity.
To be able hiara-miasa amin'ny arisart any Illustrator Ny zavatra voalohany hataonay dia ny fanesorana latabatra fiasana bebe kokoa amin'ny faritra iasanay, manao izany izahay amin'ny fipihana eo amin'ny latabatra fiasana ao amin'ny bara havia Illustrator, avy eo dia tsindrio ny menu ambony toerana ametrahany latabatra fiasana vaovao.
Hamorona latabatra fiasana maro araka izay ananantsika karazany hafa isika, ohatra raha manana endrika ho an'ny lohan-tserasera maro amin'ny tambajotra sosialy izay tsy maintsy ataontsika. mamorona artboard ho an'ny tambajotra sosialy tsirairay ananantsika.
Manao latabatra fiasana ho an'ny endriny tsirairay ananantsika izahay.
Azontsika atao ny manome anarana ny tsirairay amin'ireo solaitrabe raha tsindrio ny anarana Ao amin'ny faritra ambany ankavanan'ny, tsindrio avo roa heny izahay ary apetrakay eo amin'ilay latabatra fiasana ny anaran'ilay endrika.
Manova anarana izahay ireo latabatra fiasana ary manafatra azy ireo arakaraka ny filanay izahay mba hananana ny toerana iasantsika milamina araka izay azo atao mba hisorohana ny fandaniam-potoana noho ny fikorontanana mety hateraka.
Ny workbench tsirairay dia afaka manana a habe manokana arakaraka ny volavola ananantsika no anaovantsika izany amin'ny fanovana ny fandrefesana eo amin'ny menio ambony aorian'ny fikitihana teo aloha ny faritra misy ny toeram-piasana ary avy eo amin'ny latabatra izay tianay hanova ny habeny.
Raha mijery ny sary etsy ambony isika dia afaka mahita ny misy azy latabatra samihafa Ho an'ny tsirairay amin'ireo tambajotra sosialy lehibe, amin'ity fomba ity dia tantinay ny mampihatra ny volavolantsika amin'ny tambajotra tsirairay amin'ny alàlan'ny fampifanarahana ny volavola amin'ny haben'ny latabatra fiasana tsirairay araka ny tambajotran-tserasera misy azy.
Ny fiaraha-miasa amin'ity rafitra ity dia ho ilaina amin'ny karazana rehetra tetikasa sary satria izy io dia fomba fiasa momba ny asa matihanina izay ampiasaina isan'andro isan'andro amin'ny indostrian'ny zava-kanto.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Ahoana ny fomba fiasa amin'ny artboards ao amin'ny Illustrator